vendredi, 02 juin 2017 19:37
Cimetière Mangatokana Mahajanga: Lasa toeram-ponenan' ny velona ireo fasana
Mahalasa saina ny mahita ny zava-misy eny Mangatokana amin'ireo fasana.
Misy mihady ny sasan-tsasany amin'ireo fasana ary tsy hita ny hanaovan'izy ireo ny razana. Rehefa izay de ambolen'izy ireo akondro ilay toerana nisy ny fasana.
Tsy vitan'izay fa fefen'izy ireo ny toerana ary angoniny ireo vato nanaromana ny fasana ka hanaovany fefy. Io no tranga hita rehefa nidina teny an-toerana ny sefo Fokontany Antanimalandy sy ny filohan'ny tambazotra miaro ny zon'ny mpanjifa ary ireo olona manana fianakaviana milevina eny an-toerana izay latsa-dranomaso mihitsy mahita ny fahasahian'ireo tsy mataho-tody mikitika an-tsokosoko ireo fasana.
vendredi, 02 juin 2017 19:33
Mahajanga: Zaza roa taona maratra mafy niharan’ny fampijaliana
Zaza vavikely vao roa taona latsaka no naratra mafy ary naiditra hopitaly eny Androva vokatry ny ratra mafy nataon'ny mpitaiza azy ny alarobia folakandro.
Zaza notezaina izy io fa tsy naterak'ilay namono. Vao iray volana ity zaza ity tamin'izany fotoana izany, no nalain'ilay ramatoa izay vadim-bazaha. Tena tiany io zaza io tany am-boalohana, saingy tsy fantatra ny tena zava-nitranga nony taty aoriana fa dia nijaly ilay zaza.
Araka ny fitantaran'ny olona manodidina dia teren'ilay vadim-bazaha nitaiza azy handany anjara sakafon'olon-dehibe ity zaza ity rehefa omeny sakafo, ary dia maty kapoka rehefa tsy lany ilay vary.
Antsalova : Misy mivarotra ny gazoalan’ny Jirama
Namory ireo lehiben’ny servisim-panjakana sy olobe teto Antsalova omaly ny lehiben’ny Distrika ka nodinihina ny mahakasika ny « Jeux de Melaky » sy ny Jirama.
Nambarany fa hatsangana ny vaomiera manokana hanaramaso ny Jirama fa misy tsy milamina ao. Mangalatra gazoala ireo mpiasa ao ary mivarotra izany amin’ireo taxi-brousse sy kamiao mandalo eto an-tanàna. Nanamafy izany ny Assistant Parlementaire ary nilaza fa manana porofo.
Tokony ho amin’ny faran'ny volana jolay 2017 vao ho lany ny tahiry tao, araka ny fanambarana nataon'ny Chef secteur Jirama eto Antsalova tamin’ny fahavaratra teo, gaga ny rehetra fa tapaka ny jiro tamin’ny herinandro teo satria hoe lany ny solika, tsy nisy fanambarana.
Vao ny alarobia hariva vao nahatonga solika indray ka nampandeha ny jiro indray.
vendredi, 02 juin 2017 19:09
Madagasikara : Mijoro ny Parlemantan’ny ankizy
Toamasina no nanokafana ofisialy ny Iray volan’ny ankizy tamin’ity 2017 ity, lanonana izay natao tao amin’ny kianja mitafo ny Soavita. Nampahalalana nandritra izao lanonana izao ireo ankizy 15 mianadahy solontena isam-paritany mandrafitra ny Parlemantan’ny ankizy Malagasy, izay handrafitra sy handamina ny fametrahana tanteraka ny depioten’ny ankizy tsy ho ela amin’ny fanomanana ny fifidianana atao isam-paritra.
vendredi, 02 juin 2017 18:46
Distrika Vohibato: Manomboka ny fifaninanana masina
Sehatra iray itarafana ny fiomanana amin'ny fifidianana sahady ny hetsika ara-panabeazana isehoan'ireo mpanao politika.
Nankalaza ny faha-105 taona nisiany ny sekoly fanabeazana fototra ao Alama Vohimarina Vohibato, Faritra Mahatsiatra Ambony, nitokana ny sekoly namboarin'ny tetikasa iray tamin'ny taona 2005 ihany koa teo ambany fiahian'ny fari-piadidiam-pampianarana ao an-toerana.
Maromaro ny asa soa fanarenana sy fanatsarana ny endriky ny sekoly nataon'ny mpanao politika tamin'io sekoly io ka samy tonga nanatrika izany lanonana izany daholo izay nanana solontena tamin'izy ireo. Samy nanao tolotra sy fanomezana arak'izay fahafahany ny tsirairay tamin'izany, ary samy nametraka dian-tanana ankoatran'ny fianakavian'i Raketsa Alfred izay nanangana io toeram-pianarana io tamin'ny 1911.
vendredi, 02 juin 2017 18:44
Antsiranana : Un officier étranger agressé par des Forroches
Des jeunes délinquants ont subtilisé de l’argent et des objets personnels de l’officier. L’attaque s’est produite dans la rue Colbert. L’officier s'est blessé.
vendredi, 02 juin 2017 18:33
OSIEF Fianarantsoa : Miverina amin'ny laoniny ny raharaha
Tontosa ny famindran-draharaha eo anivon'ny OSIEF rehefa nandalo tetezamita nandritra ny volana maromaro vokatry ny disadisa nisy tao an-toerana.
Raharaham-pifidianana ny birao mpitantana tsy nilamina hatramin'ny Aprily 2015 izao nivaha tamin'ny alalan'ny fandraisana an-tanana nataon'ny ministera mpiahy izao.
Ka handray ny asa fitantanana sy fanarenana io rafitra fitsaboana ny mpiasa sy mpampiasa ary ny fianakavian'ny mpiasa io ny mpikambana vaovao miisa 9.
Raha tsiahivina dia nisy disadisa teo amin'ny mpitantana teo aloha sy ny mambra vaovao nofidiana sy notendrena ny volana aogositra taona 2015. Ka noho ny tsy fankatoavana, manohitra ireo olona ireo, dia naato ny asa fitantanana ny OSIEF ny septambra 2015, ary dia ny janoary 2017 vao nofoanana tanteraka ny momba ireo voka-pifidianana sy fanendrena ny mpikambana teo aloha.
Nanomboka teo ny tetezamita izay nitohy tamin'ny fifidianana ny 23 marsa lasa teo ka nifarana tamin'izao famindram-pitantanana izao.
Araka izany dia mandray ny asany ity andron'ny 2 jiona ity ireo mpikambana 6 voafidy sy 3 avy amin'ny fanjakana mba handrindra sy hitantana io rafitra mandritra ny 3 taona. Tsy misy intsony fanoherana azo atao aorian'izao.
vendredi, 02 juin 2017 10:40